Mesosphere: kedu ihe ọ bụ, njirimara, mejupụtara na mkpa | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 10/09/2021 10:00 | Meteorology
A na -ekewa ikuku ụwa n'ime ọkwa dị iche iche, nke ọ bụla nwere nhazi na ọrụ dị iche. Ka anyị lekwasị anya na mesosphere. Mesosphere bụ ikuku nke atọ nke ikuku ụwa, nke dị n'elu stratosphere na n'okpuru ikuku.
N'isiokwu a, anyị ga -agwa gị ihe mesosphere bụ, gịnị bụ mkpa ya, ihe mejupụtara ya na njirimara ya.
2 Mesosphere ọrụ
3 Mkpa nke mesosphere
4 Igwe ojii nke abalị na kpakpando na -agbapụ
The mesosphere gbatịrị site na ihe dị ka kilomita 50 ruo kilomita 85 n'elu ụwa. Ọ dị kilomita iri atọ na ise. Ọnọdụ okpomọkụ nke oyi akwa etiti na -ajụkwa oyi ka anya nke ụwa na -abawanye, ya bụ, ịdị elu na -abawanye. N'ebe ụfọdụ na -ekpo ọkụ, okpomọkụ ya nwere ike iru -35 degrees Celsius, ma n'ebe ndị ọzọ ọnọdụ okpomọkụ ga -agbada ruo -140 degrees Celsius.
Njupụta nke gas dị na mesosphere dị ala, ha mejupụtara oxygen, carbon dioxide na nitrogen, na nha ha fọrọ nke nta ka nke gas tropospheric. Isi ihe dị iche n'etiti akwa abụọ ahụ bụ njupụta nke ikuku dị n'etiti oyi akwa dị ala, ọdịnaya vepo mmiri dị ala, yana ọdịnaya ozone dị elu.
Mesosphere bụ akwa nchekwa ụwa n'ihi na ọ na -ebibi ọtụtụ meteors na asteroid tupu ha erute n'elu ụwa. Ọ bụ oyi na -ajụkarị nke ikuku.
Mpaghara ebe mesosphere na -agwụ ma bido a na -akpọ thermoshere mesopause; nke a bụ mpaghara mesosphere nwere ụkpụrụ okpomọkụ kacha ala. A na -akpọ njedebe dị ala nke mesosphere nwere stratosphere stratopause. Nke a bụ mpaghara ebe oyi akwa etiti nwere ọnụ ahịa okpomọkụ kacha ala. Mgbe ụfọdụ ụdị ígwé ojii pụrụ iche na -apụta na etiti dị nso na mkpanaka ugwu na ndịda, nke a na -akpọ "igwe ojii noctilucent." Cloudgwé ojii ndị a dị ịtụnanya n'ihi na ha dị elu karịa ụdị igwe ojii ọ bụla.
Ụdị àmụmà dị ịtụnanya ga -apụtakwa n'etiti etiti, nke a na -akpọ "goblin àmụmà."
The mesosphere bụ oyi akwa nke oke osimiri nke na -echebe anyị ịbanye na ikuku ụwa. Meteorites na asteroid na -ere ọkụ n'ihi esemokwu ya na ụmụ irighiri ikuku iji mepụta meteorites na -enwu enwu, nke a makwaara dị ka "kpakpando na -agbapụ." A na -eme atụmatụ na ihe dị ka tọn meteorites iri anọ na -ada n'ụwa kwa ụbọchị, mana akwa dị n'etiti nwere ike gbaa ha ọkụ ma mebie mbibi elu tupu ha abịarute.
Dịka akwa ozone stratospheric, akwa etiti na -echebekwa anyị pụọ na radieshon na -emerụ ahụ (radieshon ultraviolet). Ìhè Ugwu na Ọkụ Ugwu na -eme na ọkwa ọkaraIhe ndị a nwere nnukwu njem nlegharị anya na uru akụ na ụba n'akụkụ ụwa ụfọdụ.
Mesosphere bụ ikuku dị gịrịgịrị karịa, ebe ọ nwere naanị 0,1% nke oke ikuku niile, ọ nwere ike iru ogo ruru ogo -80. Mmeghachi omume kemịkalụ dị mkpa na -apụta na oyi akwa a na n'ihi oke ikuku dị ala, a na -akpụpụta ọgba aghara dị iche iche na -enyere mbara igwe aka mgbe ha laghachiri n'ụwa, ebe ọ bụ na ha na -amalite ịhụ nhazi nke ifufe ndabere na ọ bụghị naanị breeki ikuku. ụgbọ mmiri.
Na njedebe nke mesosphere bụ mesopause. Ọ bụ akwa oke nke kewara mesosphere na thermosphere. Ọ dị ihe dị ka 85-90 kilomita n'ịdị elu na n'ime ya ọnọdụ okpomọkụ na-akwụsi ike ma dịkwa oke ala. Mmeghachi omume Chemiluminescence na aeroluminescence na -ewere ọnọdụ na oyi akwa a.
Mkpa nke mesosphere
Mesosphere bụ ikuku mgbe niile na nyocha na nyocha kacha nta, n'ihi na ọ dị oke elu na anaghị ekwe ka ụgbọelu ma ọ bụ ikuku ikuku na -ekpo ọkụ gafere, n'otu oge ahụ dịkwa oke ala ka ọ dị mma maka ụgbọ elu ụgbọ elu. Ọtụtụ satellites na -agba gburugburu na mbara ikuku a.
Site na nyocha na nyocha site na iji roket ụda, achọpụtala oyi akwa nke ikuku a, mana ịdịte aka nke ngwaọrụ ndị a ga -enwerịrị oke. Agbanyeghị, kemgbe afọ 2017, NASA na -agba mbọ imepụta ngwaọrụ nwere ike ịmụ ihe dị n'etiti. A na -akpọ arịa a sodium lidar (nchọpụta ọkụ na oke).
Supercooling nke oyi akwa a n'ihi obere okpomọkụ dị na ya -yana ihe ndị ọzọ na -emetụta akwa ikuku - na -anọchite anya ihe na -egosi etu mgbanwe ihu igwe si agbanwe. N'ọkwa a enwere ikuku zonal nke ejiri ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ mara, ihe mmewere a na-egosi ntụzịaka ha na-eso. Na mgbakwunye, enwere ebili mmiri na ebili mmiri.
Ọ bụ oyi kpọnwụrụ na ikuku ma ị nweghị ike iku ume na ya. Ọzọkwa, nrụgide dị oke ala, yabụ ọ bụrụ na ị naghị eyi oghere oghere, ọbara gị na mmiri ahụ gị ga -esi ofe. A na -ewere ya dị ka ihe omimi n'ihi na amụtachabeghị ihe yana n'ihi na ihe okike dị iche iche dị egwu mere na ya.
Igwe ojii nke abalị na kpakpando na -agbapụ
Na mesosphere ọtụtụ ihe okike eke pụrụ iche na -eme. Ọmụmaatụ nke a bụ igwe ojii noctiluscent, nke ejiri acha anụnụ anụnụ eletrik mara ma enwere ike ịhụ ya site na mkpanaka ugwu na ndịda. A na -emepụta igwe ojii ndị a mgbe meteor kụrụ ikuku wee wepụta ụdọ, uzu mmiri na -ajụ oyi sitere n'igwe ojii ga -arapara n'ájá.
Cloudgwé ojii ma ọ bụ ígwé ojii dị elu dị elu karịa igwe ojii nkịtị, ihe dị ka kilomita 80 n'ịdị elu, ebe igwe ojii nkịtị a hụrụ na troposphere dị ala nke ukwuu.
Kpakpando na -agbapụ na -ewerekwa ọnọdụ n'ime ikuku a. Ha na -eme na ọkwa ọkara na ihe ndị mmadụ na -eji kpọrọ ihe nke ukwuu. A na -emepụta "kpakpando" ndị a site na ndakpọ nke meteorites, nke na -esite na esemokwu na ikuku dị na mbara ikuku na -emepụta ya wee mee ka ha na -amụnye ọkụ.
Ihe ọzọ na-eme na ikuku a bụ ihe a na-akpọ ụzarị elf. Agbanyeghị na achọpụtara ha na ngwụsị narị afọ nke 1925, nke Charles Wilson gosipụtara na XNUMX, mmalite ya ka siri ike nghọta. Ụzarị ndị a na -achakarị ọbara ọbara, na -apụta na mesosphere, a na -ahụkwa ha anya site n'igwe ojii. Amabeghị ihe na -ebute ha, na dayameta ha nwere ike iru iri puku kilomita.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara mesosphere na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ahịa